OnePlus 3T Review - News Ọchịchị
Isii Best Wi-Fi okwu	OnePlus 3T Review
n'ozuzu Akara5	The OnePlus 3T bụ ihe magburu onwe smartphone. The kwesịrị ekwesị na imecha ziri ezi n'ebe ahụ na nke kacha mma, na metal imewe bụ nụchara anụcha na ọbụna na a 5.5in ihuenyo, ọ bụ a gh smartphone na-eji eme ihe kwa ụbọchị.	The ọhụrụ, mma gam akporo ngwaọrụ nwere ike ịbụ nnọọ ihe na-kwe ọnụ ahịa na OnePlus 3 bụ, ma ọ bụ ka nri n'ebe ahụ na nke kacha mma
Isiokwu a na-akpọ “OnePlus 3T review: n'elu-ọgwụgwụ smartphone na-agaghị agbaji akụ” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Monday 5th December 2016 07.00 UTC
The OnePlus 3T bụ obere update ka a dị ezigbo mma smartphone nke mma na ụfọdụ ndị bụ isi ebe, ma ọ bụghị nnọọ na kwe ọnụ ahịa mbụ bụ.
The Chinese smartphone ike naanị tọhapụrụ ndị OnePlus 3 na June, ma ama na ọ na e dochie. The 3T bụ ihe fọrọ nke yiri ya ụzọ, a nta agba dị iche na-abụghị nanị na-egosi na ihe agbanweela.
Dị ka OnePlus ngalaba-nchoputa Carl Pei, na ụlọ ọrụ nwere ụfọdụ ndozi dị nke ga-dabara ọzọ ma ọ bụ na-erughị ke otu ngwugwu - a ibu batrị, ngwa ngwa processor na mma ese foto - mere kama na-eche a afọ, ya nanị dochie OnePlus 3 na 3T.
Ma n'otu oge ahụ ọ na nwekwara ụba na price nke smartphone, si ya mbụ £ 309 na igba egbe, site na post Brexit referendum ego ukpụhọde nke £ 329 na a amalite price nke £ 399. Bụ ọhụrụ 3T uru £ 70 na ihe karịrị ochie 3?
Nụchara anụcha na-eji ire ụtọ
The egbe metal isi awọ agba bụ ubé darker karịa ndị isi awọ nke OnePlus 3. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The ezigbo aluminum ahụ na a curved azụ na beveled n'akụkụ na-ele bụla bit dị ka ezi ọnwa isii on na 3T. Ọ bụ a dị mma nke ukwuu smartphone jide, -emetụ na-enwe ekele maka: O doro anya na 3T nwere na anya na obi na-adị nke a smartphone efu ihe karịrị £ 400.
The 5.5in 1080p AMOLED ihuenyo dị ukwuu. Ugbu a, i nwere ike hazie agba ụda gị chọọ, ọ bụ ezie na nke igbe ọtụtụ ndị ga-enwe nnọọ obi ụtọ na ndị na-apụtachaghị agba mode OnePlus jiri tụnyere ndị ọzọ AMOLED-eji igwe dị ka Samsung Galaxy S7.
Na a pixel njupụta nke 401 pikselụ kwa anụ ọhịa ahụ, na 3T adịghị ezi dị ka crisp dị ka n'elu-ọgwụgwụ Android asọmpi, nke nwere quad HD mkpebi n'otu ihuenyo size, ya mere n'akụkụ-na-n'akụkụ na a 534ppi Google Pixel XL ya anya ubé obere pin nkọ. Kasị ga-enwe obi ụtọ na ya, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ otú ahụ daa ogbenye n'ihi mebere eziokwu ngwa.
The warara bezels na curved azụ ime ka o gh otu n'aka ọbụna na 5.5in ihuenyo. Ọ bụghị nnọọ ka warara dị ka nke ugbu a eze ndị buru ibu na ihuenyo na a obere gbasiri ekwentị, na Samsung Galaxy S7 Edge, ma ọ bụ 1mm narrower karịa Pixel XL.
The anya mmịfe enye gị ohere ngwa ngwa ịgbanwe n'etiti nkịtị, mkpa na niile Ịma Ọkwa. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
OnePlus 'magburu onwe ngosi mmịfe completes ụfọdụ ọma mere buttons na ekpe na n'akụkụ aka nri nke ekwentị.
Ram: 6GB nke Ram
Nchekwa: 64 ma ọ bụ 128GB
Sistemụ nrụọrụ: Android 6.0.1 OxygenOS 3.5
Igwefoto: 16MP n'azụ igwefoto na OIS, 16MP n'ihu-eche ihu igwefoto
Njikọta: LTE, Sọrọ-SIM, Wi-Fi, NFC, USB-C, Bluetooth 4.2 na GPS
Akụkụ: 152.7 x 74.7 x 7.35 mm
Ogologo ndụ batrị
Akụpịa Charge site USB-C maka a ngwa ngwa rijuru afọ elu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The OnePlus 3T nwere otu ego nke na ebe nchekwa na nchekwa dị ka nke bu ya ụzọ, ma nke nwere ubé ọzọ dị ike processor: na Snapdragon 821 site Qualcomm, nke na-eji ndị ọzọ elu-ọgwụgwụ Android smartphones gụnyere Pixel XL.
Ọ na-adị snappy, ma ọ bụghị nnọọ ndị kasị smartphone na ahịa: na Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9. Ọ na-adịghị ihe ọ bụla ngwa ngwa karịa ndị OnePlus 3, ma batrị ka adịru ogologo n'etiti ebubo. Ọ nwere a ubé ibu batrị, na software nnụcha ihe karịrị ikpeazụ ọnwa isii mere ahụmahụ smoother.
-Eji dị ka m bụ isi na ngwaọrụ na ise awa nke na-ege ntị music site Bluetooth earbuds, awa atọ nọrọ nchọgharị ma ọ bụ na-eji ngwa ọdịnala, mgbe ụfọdụ egwu egwuregwu, na-ewere foto, na narị push Ịma Ọkwa nile ụbọchị, na OnePlus 3T kere gburugburu 36 awa n'etiti ebubo.
The nnukwu mma n'elu 3 nọwo na nọrọ na njikere arụmọrụ: ebe 3 ama esịn 12-16% n'otu ntabi anya, na 3T ama esịn naanị 4%, nke bụ nnọọ mma tụnyere ndị kasị nke mpi.
Nchaji batrị bụ ngwa ngwa, oke. Na OnePlus 'proprietary Dash Charge ike nkwụnye na cable na o were nanị ihe karịrị 70 nkeji iru 100% si efu ụgwọ, nke bụ nri e ji ihe ndị kasị odori smartphones. Ọ nwekwara ike-ebubo iji mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla USB chaja, ma na a ọkọlọtọ ọnụego.
Abụọ SIM ohere mpere ekwe ka ị na abụọ nọmba jikọọ onye ekwentị. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The OnePlus 3T na-nwere sọrọ-SIM support, nke pụtara abụọ na ekwentị mkpanaaka contracts na abụọ nọmba ike-eji n'otu oge ahụ n'otu ekwentị. Ọ bụ a nkịtị na bara uru atụmatụ ke Asia, ma obere na UK, na-eme ka ejegharị ma ọ bụ na ụma ọrụ na onye ekwentị nnọọ mfe n'ime otu ngwaọrụ.
The akara mkpisiaka nyocha na n'ihu, nke okpukpu abụọ ka a home button, bụ magburu onwe. Ọ bụ ngwa ngwa, ezi na arụ ọrụ dị ukwuu.
OxygenOS 3.5 bụ a ubé tweaked version nke Android 6 Marshmallow na ụfọdụ n'ime akụkụ nke Android 7 Nougat. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
OnePlus customises Android ike OxygenOS. N'adịghị ka ụfọdụ ndị ọzọ Nsukka mgbanwe nwere aghụghọ, ọzọ gbanwerela kama kpam kpam alterations.
Ọ bụrụ na ị na-akwado nke ọkọlọtọ Android ahụmahụ, ị ga-aghọta OxygenOS. Na o nwere ihe customization nhọrọ, si ike gbanwee igodo buttons n'elu, tiye ha n'elu ihuenyo ma ọ bụ jiri capacitive buttons n'akuku akara mkpisiaka nyocha, ka akp ogbugbu nkwado na Tweaks maka sọrọ-SIM ike.
Ma 3T n'ụgbọ mmiri, ha OxygenOS 3.5, nke dabeere ikpeazụ afọ Android 6.0.1 Marshmallow, ọ bụghị Kacha ọhụrụ gam akporo 7 Nougat. OnePlus na-atụ anya ka nwere ihe update ka Nougat dị tupu ọgwụgwụ nke afọ. Rute ugbu a, ọ bụghị kasị mma track ndekọ maka ngwa ngwa software mmelite, ma emewo wee ka mma n'elu ikpeazụ ọnwa ole na ole.
The igwefoto bụ ihe ọma na igwefoto ngwa mfe iji. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The 16-megapixel n'azụ igwefoto nwere ụfọdụ aghụghọ mmeli mma na ezu ma mkpọtụ suppression n'elu OnePlus 3. N'ozuzu ọ bụ a ruru eru igwefoto, agbapụ zuru ezu gbaa na ezigbo ọkụ ma na ihe siri ike ma ọ bụrụ na ọ bụghị dị ịrịba ama gbaa na lowlight. Ọ bụghị nnọọ dị ka ihe ọma dị ka ndị kasị mma site Samsung ma ọ bụ Google, ma ọ bụ ike na-a ezigbo iberibe shot na 3T.
The 16-megapixel selfie igwefoto bụ otu n'ime ndị kasị elu mkpebi n'ihu-eche ihu ese foto dị, na ọ bụ ezie na ihe megapixels ọ bụghị mgbe nile tụnyere mma na ya pụta, na 3T emepụta ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị zuru ezu na eke-na-achọ selfies m na mgbe gbara, ọbụna siri ike ọkụ ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka ụlọ ọrụ fluorescent warara ọkụ.
The OnePlus 3T bụ dị na ma egbe metal isi awọ ma ọ bụ adụ gold na 64GB nke nchekwa maka £ 399 ma ọ bụ nanị na egbe metal na 128GB nke nchekwa maka £ 439. Ọ bụ na-dịnụ nanị na a na ekwentị mkpanaaka nkwekọrịta na O2 na UK.
n'ihi na ha tụnyere, na 5.5in Samsung Galaxy S7 Edge -efu £ 520, na Google Pixel XL -efu £ 719, na Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9 -efu € 699 (£ 589) na Apple iPhone 7 Ọzọ -efu £ 719.
The OnePlus 3T bụ ihe magburu onwe smartphone. The kwesịrị ekwesị na imecha ziri ezi n'ebe ahụ na nke kacha mma, na metal imewe bụ nụchara anụcha na ọbụna na a 5.5in ihuenyo, ọ bụ a gh smartphone na-eji eme ihe kwa ụbọchị.
Ọ bụghị nnọọ na kwe ọnụ ahịa na OnePlus 3 bụ, na m na-echeghị na ọ bụ ọnụ ahịa £ 70 karịrị aga na ihe nlereanya. Ma na ego fluctuations ụzọ ha bụ na paụnd ala megide US dollar ọ bụghị ihe niile banyere uru. Ọ bụ ka ndị magburu onwe uru maka £ 400 mgbe Apụl na Google si Ẹkot smartphones, na-anya isi na-erughị nchekwa, -eri £ 719.
Site ná nkwado nke O2, OnePlus na-now nwere ihe legitimacy ka a emeputa na UK. Na mgbe e nwere ihe na-imeziwanye ihe, ụlọ ọrụ na-agba mbọ na-anapụta ngwa ngwa software mmelite.
Ị ga-esi karịa ihe ị kwụọ ụgwọ maka na OnePlus 3T tụnyere rivals.
Uru: ihe niile na-metal, oké mkpisiaka ihe mmetụta, ezi ákwà ngebichi, ngwa ngwa Nchaji, ezi ese foto, magburu onwe ngosi mmịfe, sọrọ-SIM na sọrọ na nọrọ na njikere, ọnụ ala karịa rivals
Ọghọm: ọ bụghị ezi dị ka ọnụ ala dị ka ọ na otu bụ, ọ dịghị mbughari batrị, ọ dịghị expandable nchekwa, onye na-adịghị Nchaji si na-abụghị Dash ụgwọ ike ihe nkwụnye, ihuenyo ala nchapụta maka VR, adịghị ma na-agba ọsọ Nougat
The curved azụ na-adị oké n'aka na-emepụtakwa ụfọdụ na-akpali reflections na agba site na dị iche iche ìhè na isi mmalite. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ise nke ndị kasị mma phablets maka 2016
Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9 nyochaa: nnukwu ihuenyo, ogologo ndụ batrị na sọrọ ese foto
Google Pixel XL review: dị nnọọ mma phablet ma na price mkpado iji kwekọọ
Huawei P9 Plus review: elu-klas phablet nwere azụ site sub-par software
iPhone 7 Plus nyochaa: 2014 -akpọ - na ọ chọrọ ka ya phablet azụ
Enyocha mbara igwe Discover Giant Earthlike Planet
Asaa kechioma Ụzọ na Ịgba chaa chaa Gbanwere na maths
Peter	Dec 20, 2016	Post igodo
← Amazon ikwughachi Dot Review
Ọ bụ Time na-gbanwee gị Mac maka a Windows laptọọpụ? →
TranslationEnglishAfrikaansShqipالعربيةՀայերենazərbaycan diliEuskaraБеларускаяবাংলাbosanski jezikБългарскиCatalàBinisaya中文(简体)中文(漢字)HrvatskiČeštinaDanskNederlandsEsperantoEesti keelSuomiFrançaisGalegoქართულიDeutschΕλληνικάગુજરાતીKreyòl ayisyenHarshen HausaHmoobHmoob Dawעבריתहिन्दी; हिंदीMagyarÍslenskaAsụsụ IgboBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語basa Jawaಕನ್ನಡភាសាខ្មែរ한국어ພາສາລາວLatīnaLatviešu valodaLietuvių kalbaмакедонски јазикBahasa MelayuMaltiTe Reo MāoriमराठीМонголनेपालीNorskپارسیPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăРусскийCрпски језикSlovenčinaSlovenščinaAf-SoomaaliEspañolKiswahiliSvenskaTagalogதமிழ்తెలుగుภาษาไทยTürkçeУкраїнськаاردوTiếng ViệtCymraegייִדישèdè YorùbáisiZuluChinyanjaҚазақ тіліMalagasy fitenyമലയാളംမြန်မာစာSesothoසිංහලBasa SundaТоҷикӣOʻzbek tiliMee ka ndabere asụsụ Dezie TranslationSoro anyị
33130	Ịṅụ kọfị nwere ike Belata Onwe Egwu!
26462	5 Ụzọ brighten Up gị ime
32929	Anụ Ọhịa Wolf’ Eti mkpu ákwá Pụrụ ID'd site Computer
30126	Apple ọlaedo iPhone 5S ka na-eru queues na London
27781	Best Deals!	Na nso nso Isiokwu	Amazon Fire 7 Tablet Review
Jun 23, 2017	Nokia 3310 Review: Blast si n'Oge Gara Aga
Nwere ike 21, 2017	Olee otú Izere Online Nledo
Nwere ike 14, 2017	Amazon Fire TV Stick Review: Cheap, Great TV gụgharia Device
Apr 15, 2017	Samsung Galaxy S8 na S8 + kpughere na 'ebighebi ngosi’
Apr 1, 2017	© 2017 Copyright Newsrule.com	Tụgide Ọ on Pinterest